အာတိတ်ဒေသသည် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင် ရှိသည့် ကမ္ဘာ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်သည် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ရှိသည့် အန္တာတိက ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ၏ အလယ်ဗဟိုကို ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်ဟု မှန်းဆထားအပ်သော အီကွေတာ မျဉ်းကြောင်းမှ မြောက်လတ္တီဒ် ၆၆°၊ ၃၃″တွင် အာတိတ်စက်ဝိုင်းခေါ် စိတ်မှန်းမျဉ်းကြောင်းရှိ၏။ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှ ထိုအာတိတ် စက်ဝိုင်းမျဉ်းကြောင်းအတွင်းရှိ ၂၃°၊ ၂၇″ ကျယ်ဝန်းသော နေရာကို အာတိတ်ဒေသဟု ခေါ်ကြသည်။ အာတိတ်စက်ဝိုင်းမျဉ်းကြောင်းသည် အာရှတိုက်၊ အမေရိကတိုက်၊ ဥရောပတိုက်တို့၏ အစွန်းအဖျားများကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။ အာတိတ်ဒေသ၏ ကျန်စတုရန်းမိုင် ၈ဝဝဝဝဝဝ ကျော် ကျယ်ပြန့်သော အစိတ်အပိုင်းကြီးမှာ စတုရန်းမိုင် ၅၄ဝဝဝဝဝ ခန့်ကျယ်ဝန်းသော အာတိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် ထိုသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ကျွန်းပေါင်း မြောက်မြားစွာတို့ ဖြစ်သည်။အာတိတ်ဒေသတွင် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ ၊ ကနေဒါ ၊ ဂရင်းလန်ကျွန်း ၊ ရုရှ ၊ အမေရိကန် (အလာစကာ) ၊ အိုက်စ်လန် ၊ နော်ဝေ ၊ ဆွီဒင်နှင့် ဖင်လန် နိုင်ငံတို့မှ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ကြသည်။
အာတိတ် ဟူသော စကားလုံးသည် ဂရိဘာသာရှိ ἀρκτικός (arktikos) ဟူသော စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာပြီး "ဝက်ဝံကြီးအနား၊ မြောက်ပိုင်း" ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို့ပြင် ἄρκτος (arktos) ဟူသော စကားလုံးသည် "ဝက်ဝံ"ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Henry George Liddell and Robert Scott. "Arktikos." A Greek-English Lexicon. Perseus Digital Library.
Henry George Liddell and Robert Scott. "Arktos." A Greek-English Lexicon. Perseus Digital Library.